Uvalo kuhoxiswa izicelo kwabesibhakela
INKULU ingebhe kubaqhathi bezimpi ngokuthi unyaka u-2021 ungase ube muncu njengoba kwenzekile nyakenye kuba nomqhudelwano owodwa nje vo kwezamankomane okudalwe wukuvalwa kwezwe ngenxa yegciwane iCorona. Isithombe: Pixabay
INKULU ingebhe kubaqhathi bezimpi ngokuthi unyaka u-2021 ungase ube muncu njengoba kwenzekile nyakenye kuba nomqhudelwano owodwa nje vo kwezamankomane okudalwe wukuvalwa kwezwe ngenxa yegciwane iCorona.
Ngemuva kokuthi uMengameli, uCyril Ramaphosa, ebuyisele izwe esigabeni sisithathu, iBoxing South Africa (BSA) ihoxise zonke izicelo zophromotha zokwenza imiqhudelwano.
I-BSA ithe izolinda inkulumo elandelayo kaRamaphosa kuyimanxa ithatha ezinye izinqumo.
Ukuhoxiswa kwezicelo kusho ukushintsha kwezinsuku ophromotha abese beziqokile zokuqhatha.
I-BSA ithatha izinsuku eziwu-30 ngaphambi kokuphumelelisa umqhudelwano.
KwaZulu-Natal izimpi eziphazamisekile ngalokhu ngezeLudonga Boxing Promotions obekumele zibe izolo KwaNongoma, ezeMvelo Promotions ebezizoba eGolden Horse Casino ngoFebriwari 6 nezeTap Tap Promotions ebezizoba eMpangeni ngoFebruwari 20 nezeStarline Promotions ebezizoba eThekwini ngoFebruwari 27.
Okubukeka zisaphephile ezeDMZ Sotobe ezizoba ngoMashi 6 eThekwini. Kophromotha Isolezwe elikhulume nabo bazwakalise ukuphatheka kabi, besaba ukuthi nalo nyaka uzoba mnyama.
Ngonyaka odlule ube wodwa umqhudelwano obuwenziwe iStarline ngoFebruwari 29, eDundee.
UThulani Magudulela weLudonga uthe abantu abadabukela kakhulu ngamabhokisa abhuqwabhuqwa indlala.
“Sekunzima nokuhlela, uthi sewucabangile ukuthi uzokwenzani kuvele ukuthi lesi sifo sesihlasela kakhulu. Kwenzeka lokhu nje, amabhokisa nabaqeqeshi nophromotha basuke bezilolonga besebenzisa nemali. Kwaze kwanzima. Iningi lamabhokisa lithembele esibhakeleni, kalisebenzi. Kusiphatha kabi ukuthi ngonyaka odlule ube munye kuphela umqhudelwano owenziwe,” kubeka uMagudulela obezwakala ukuthi uphatheke kabi.
UNomvelo Magcaba-Shezi weMvelo Promotions, uthe sekucacile ukuthi umqhudelwano abezowenza ngoFebruwari 6 uzohlehla. Uveze ukuthi bese eqalile ukusebenzisa imali ewulungiselela. Kuwo ubezoqhatha uThabiso “The Rock” Mchunu olwa kwiCruiserweight.
“I-BSA imisa izicelo zezimpi nje, bese simaphakathi namalungiselelo omqhudelwano. Besikhuluma noYouri Kalenga waseDRC ukuthi alwe noThabiso empini ebizoba yimizuliswano eyishumi. Konke lokhu sekubhuntshile. Ngonyaka odlule sithwale kanzima, nakulo nyaka kubukeka kusazoba nzima.”
UZandile Malinga weStarline uthe lokhu kuhlehliswa kwezimpi sekwenze nabaxhasi bawungabaza umdlalo wezamankomane.
“Angazi ngizothini kula bantu abebethembise ukuxhasa umqhudelwano wami. Akesithembe uMengameli Ramaphosa uzoxegisa enkulumweni yakhe. Nokwenza le miqhudelwano kasitholi lutho njengoba kuvunyelwe izihlwele ezimbalwa. Sesenzela amabhokisa.“